China Golden Flower Flower Stainless Steel Sculpture sy mpanamboatra | Piedra
Sary sokitra stainless vy volamena
Mahasarika anao ve ity sary sokitra Voninkazo Voninkazo ity? Ny famolavolana dia mitombina ary tena tsara. Mihevitra aho fa ity sary sokitra voninkazo vy ity dia azo apetraka ao anaty zaridaina na tokotany toy ny sary sokitra haingo kanto. Ity sary sokitra vy lehibe ity dia iray amin'ireo sary sokitra tiako indrindra amin'ny sary vongan'ny zavamaniry matotra. Azontsika atao ny manamboatra ny sary sokitra rehetra ho takiana aminao. Manana karazan-vokatra isan-karazany ny tranonkalantsika ahafahanao manamarina izany raha mila jerena.
sary sokitra Sarivongana haingon-trano zaridaina maoderina
lafiny Sary sokitra namboarina
Style Sary sokitra
Application Ny sary sokitra anatiny na ny sary sokitra ivelany
Adiresin'ny orinasa Xiamen, Fujian, Sina
entana Miankina amin'ny haben'ny sary sokitra
Fandefasana Fandefasana ranomasina
Fotoana famokarana Manodidina ny 30-45 andro
QC Mpiasa matihanina hiantoka ny kalitao
MOQ 1 Piece dia misy
Inona no fenitra fanamboarana orinasa ataonao?
Ny orinasa manokana sy orinasa famoahana orinasa maharitra dia mpanamboatra fanamboarana tsy tapaka. Manana mihoatra ny 13 taona nanamboarana traikefa amin'ny sehatry ny fanaovana sokitra. Mandritra izany fotoana izany ny fonenanay dia rakotra 1000 metatra toradroa, izay misy asa tanana sy asa-tanana ary mpanao sokitra tsara. Misy departemanta sasany ao amin'ny orinasa anay, toy ny departemanta mividy, departemanta famokarana, departemantan'ny fanaraha-maso kalitao, ny departemanta sy ny fitaterana sns.
F1: orinasa mpanamboatra na varotra ve ianao? Aiza no misy azy?
Izahay dia vokarina ao Xiamen, Fujian.
F2: Ahoana no ahafahanao manaiky kely na lalana baiko?
Baiko kely no fironana! Ny MOQ dia singa iray
F3: Inona no hataoko raha manana fitarainana aho na maniry hanao fangatahana fiantohana?
Azafady mba mifandraisa amin'ny varotra izay nividiananao ny vokatra ary mifandraisa aminy sy izy taloha ary hazavao ny fitarainanao. Ianao koa dia mila mitondra ny porofon'ny fividianana miaraka aminao. Aza hadino fa ny orinasa iray dia voatery hiatrika ny fitarainanao.
F4: Azonao atao ve ny mandefa anay ny katalaoginao?
Mazava ho azy fa manana sary sokitra maro ho an'ny safidinao ianao, manana orinasa E-katala ary afaka hainao tsara ny kolontsainan'ny orinasa.
Previous: Vovoka vita amin'ny vy Corten vita amin'ny baolina
Manaraka: Zavamaniry fahitana momba ny Abstract ankehitriny
Fanamboaran-jiro vy vy an-jaridaina any ivelany ...
Sary sokitra vy vita amin'ny vy miaraka amin'ny trondro Urban Modern ...
Akanjo marika vy metaly ahitra vy aho
Sary sokitra vita amin'ny metaly vy metaly vita amin'ny metaly ...